Zvakanakira kushandisa SoonLink ARS.
1.Get inofambiswa uye zvabuda nyore uye pakarepo
2.Engage nevateereri vako, vadzidzi
3.Liven kumusoro mharidzo yako
5.Increase ari kunyatsoteerera vateereri
Ndezvipi zvakanakira SoonLink ARS?
1.2.4GHz kakawanda Wireless, hapana WiFi zvinodiwa;
2.Long kure kukurukurirana, kusvikira 100 metres.
3.NFC nokuti paring.
4.Classic Muchiitiko yakagadzirwa uye zvipfupi mashandiro inowanikwa, zvikuru nyore kushandisa.
5.Instant, zvabuda yakarurama uye kunyorwa sezvo vachivapa kushandiswa pave paya.
6.No kukamurwa mushandisi vachikanganisa.
7.Wonderful ruzivo kushandisa chero nguva kupi.
Zvechokwadi 8.Low mutengo.
Ndechipi-chaiyo nguva Wireless vateereri mhinduro hurongwa (ARS)?
A-chaiye nguva vateereri mhinduro kwava hurongwa rokuchera mashoko kubva muzvizhinji pane kuva nechepakati mugove ane nechepakati processor uye chawo yemapurisa mugove kure ine muzvizhinji kuti Wireless akapindura vezvikwata kuti vacho kuti ade kupinda Achipindura Data kuti nemaziso oneka kuratidzwa ringaita kuratidzwa vachirarama, pamusoro paterevhizheni tarisisa kana anogona taped. The Kuratidzwa zvingasanganisira vakawanda mibvunzo sarudzo. The nechepakati processor rinoungana mhinduro Data Via redhiyo, Manyiminya kana acoustic yokukurukura Links pamwe kure zviumbu, chimwe nechimwe chine akasiyana kero. The nechepakati processor anoratidza vaunganidza mhinduro Data munguva chaiyo uye vanogona kufukidza kupatsanurwa rudaviro Data uye tinobva kuratidza kuratidzwa vacho.
Chii chinogona SoonLink ARS kushandiswa?
The SoonLink ARS akakwana kuti siyana rinoshandiswa kusanganisira kudzidzisa kudyidzana, misangano mavhoti uye Misangano ongororo. Vanogonawo kushandiswa kubvumira vaivapo kupa inofambiswa panguva mudonzvo kudzidzisa, okudhindira uye mazano ngozi. nguva Chero kuti unofanira kuvhota imwe nyaya kana kuunganidza mashoko kubva vazhinji, SoonLink ARS ndiyo nzira wakakwana kuzviita.
Ko SoonLink ARS panofanira?
The SoonLink ARS rine Hardware uye software. The Hardware ine imwe nhamba Wireless keypads (kusvika 2000) uye pasina tambo mugamuchiri uye USB waya. The Software anogona kuiswa computer yako zvisinei inoyerera kwava Microsoft Windows kana Mac Os.
Sei keypads kushanda?
SoonLink Wireless kuvhota keypad rakakomberedza kukura kadhi rechikwereti. The keypads vanopiwa mumwe munhu ari mukirasi, musangano kana musangano. The Mapedhi kukurukurirana ine chingwa-saizi Wireless mugamuchiri iyo richibatanidza ane kombiyuta Via imwe USB wire, rokutora mhinduro kune mibvunzo zvizere zvakarurama. Izvi zvinogona kuva zvikuru anokosha nzira kuunganidza inofambiswa sezvo achibvumira zvachose kusazivikanwa mhinduro dzisina rinotungamirirwa vazhinji. Migumisiro vanonziwo collated uye vakaratidza anenge pakarepo. Izvi nokukurumidza zvikuru kudarika chero Chinyorwa nzira kuvhota kana dzinovaka mazambiringa.